Kana iwe ukadzidza kubva mukukundwa, hauna kunyatsokundwa. - Zig Ziglar - Anodzokorora Pedia
Hupenyu hunokanda kwatiri zviitiko zvakasiyana. Isu hatidaro gara uchinzwisisa chikonzero kumashure kwezviitiko zvese. Asi tisingazive, izvi zvese zviitiko zvinobatsira neimwe nzira mukuumba munhu watinova chaizvo. Zvimwe zviitiko zvinotipa mufaro, vamwe vanotipa kusuwa.
Kubudikidza nezvose izvi tinokura uye hupenyu hwedu hunova hupfumi munzira yavo pachavo. Tinogona kunzwa setisingabatsiri panguva yedu yakaoma, asi isu tinofanirwa kuzviona sechikamu uye nekutarisira nguva dzakauya. Positivity inotipa simba rekutarisana nezvatingave tichifunga zvisingafungidziriki.
Pane zvinhu zvakawanda zvekudzidza kana munhu akatarisana nenguva yakaoma kana kana kutomborasikirwa. Inotidzidzisa kutsungirira uye inotipawo mufananidzo wakajeka wezvatiri kunyatsogona. Isu tinonzwisisa kuti kurwadziwa kwacho kuri kukuru asi tinoziva zvakare kuti iyo chete sarudzo ndeyekukunda.
Idzi nguva dzakaoma dzinotiudza kuti shamwari dzangu chaidzo ndiani. Inotibatsira kuvaka zvisungo zvinogara zveupenyu. Zvinonzi shamwari dzakasiya mamiriro ezvinhu akashata vanonzwisisana zvirinani nekuti vanosangana nedutu pamwechete. Nekudaro, pane zvidzidzo zvakasiyana siyana zvatinodzidza, uye zvakanyanya kana tikatarisana nenguva dzakaoma kana kutokundwa.
Saka usambonzwa kuti wakarasika chaizvo kana uchinge wakundwa, nekuti wakadzidza zvidzidzo zvako nenzira yakaoma uye uchagara newe nekusingaperi. Iwe wawana huchenjeri uye unayo kukunda kukunda kuita kuti uve nesimba kupfuura iwe.
Zvakanakisa Pfupi Quotes Kubva
Chidzidzo Yakadzidza Quotes
Pfupi Kunzurudza Kutaura
Mitambo Inokurudzira Quote
Nhaurwa dzeMitambo Sayings
Yakasimba Mapfupi Quotes